TAHIRIM-BOLA IRAISAM-PIRENENA : “Hita taratra ny ezaky ny mpitondra hanatsara ny toekaren’ny Malagasy”
Nitondra ny tatitra mahakasika ny fomba fahitan’izy ireo ny harin-karenan’i Madagasikara ny teo anivon’ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI, omaly. 11 juin 2019
Nivoitra tamin’izany fa tsy mitsahatra mihatsara ny toekarena eto Madagasikara ary tena hita mivaingana, hoy ireo iraka avy amin’ny FMI, ny finiavana sy ny ezaka ataon’ny mpitondra ankehitriny hampiakarana ny harin-karena eto Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy.
Tamin’ny taona 2018 dia teo amin’ny 5, 2% ny harin-karena faoben’i Madagasikara izay efa azo lazaina ho mamaly ny filàn’ny mpamokatra sy ny mpampiasa vola eto amintsika. Ho an’ity taona 2019 ity dia azo antokoa tsara ny fiakaran’io harin-karena faobe io. Mifamatotra amin’izany ny fiakarana eo amin’ny fanondranana ny vokatra lavanila sy ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Ho an’ny tetikasa Fec kosa indray dia nanambara ny iraka manokana fa tena nahafa-po izany ho an’ny taona 2016 ary mbola hihatsara izany ho amin’ity taona ity.
Nambaran’izy ireo ho anton’izany ny fanajan’ny mpitondra an’ireo fepetra napetraka hatramin’ny taona 2018. Nanamafy ny minisitry ny vola sy ny toekarena, Richard Randriamandrato fa efa azo tsapain-tanana ny fihatsaran’ny harin-karena faobe amin’izao fotoana izao. “Azo lazaina fa na dia eo aza ilay vanim-potoana mbola nanomanana ilay lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasiam-panintsiana iny dia azo lazaina fa tsara dia tsara ny toekarentsika amin’izao fotoana izao.
Eo anetrahan’ireo mpamatsy vola samihafa dia mino sy matoky ny governemanta fa hitombo araka ny tokony ho izy ny harin-karena amin’ny ankapobeny. Salama tsara ny toekarentsika ary afaka matoky fa tsy misy ahiana”, hoy ny fanazavana noentin’ny minisitra. Ankoatra izay dia nitondrany fanazavana ihany koa ny mahakasika ny vidin’ny solika. Nambarany fa tsy maintsy ahitana fidinany izany ary ny fitondram-panjakana izay tarihan’ny Filoha Andry Rajoelina dia manao ny ezaka rehetra hahatanteraka izany.
“Ny Filohan’ny Repoblika efa niteny, tsy maintsy atao izay hampidinana ny vidin’ny solika noho izany dia tsy maintsy mitohy hatrany hatrany ny fifampiraharahana amin’ireo mpamatsy solika. Efa manaiky daholo ny mpamatsy solika fa tena azo atao tsara izay zavatra izay fa any amin’ilay vesatra no mila jerena hoe ahoana ny fomba hampidinana azy. Ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo no iadivan’ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fampidinana ny vidin’ny solika”, hoy hatrany ny minisitry ny vola sy ny toekarena, Randriamandrato Richard. Ireo iraka manokana avy amin’ny tarihim-bola iraisam-pirenena dia midera manokana ny ezaky ny fitondram-panjakana ankehitriny ao anatin’ilay politika ankapoben’ny fanjakana mba ho fanatsarana manokana ny sosialim-bahoaka.